इनाम र सिकाउने पुरस्कार फाउन्डेशन प्रेम, यौन र इन्टरनेट
सिक्ने मेमोरी र सिकाउने
"मेमोरीको उद्देश्य हामीलाई अतीतको सम्झना गर्न दिँदैन, तर हामीलाई भविष्यको आशा गर्न दिनुहोस्। स्मृति भविष्यवाणीको लागी एक उपकरण हो। "
यहाँ सिक्ने शक्तिमा दुई उपयोगी TED वार्ताहरू छन्।
पहिलो स्ट्यानफोर्ड प्रोफेसर द्वारा छ क्यारोल ड्वेक हामी सुधार गर्न सक्छौं भन्ने विश्वासको शक्तिमा। उनको कुरा भनेको हो कि हाम्रो प्रयास गर्न को लागी "प्रयास र कठिनाई" हाम्रो न्यूरोन्सले नयाँ जडान गर्दै हामी सिक्न र सुधार गर्दै छौं। यो पछि भवन ग्रे ग्रेट / न्यूरोन्स मद्दत गर्न सशक्तिकरण संग संयुक्त रुपमा प्रिन्टसेक्समा।
दोस्रो हो एंजेला ली डकवर्थ र सफलता सिर्जना गर्न "चिन्तित" को भूमिका मा विचार गर्दछ।
सिकाइको अनुभव व्यवहारको परिणाममा परिवर्तन हो। यसले हाम्रो वातावरणलाई अनुकूलन गर्न मद्दत गर्छ। शास्त्रीय कंडीशनिंग सिकन को एक रूप हो जुन कहिले काँही "Pavlovian कंडीशनिंग" को रूप मा संदर्भित गरिन्छ। बिल्ल ध्वनिको बारम्बार जोडीले खानाको कारणले पेलोको कुक एक्लै बेलको आवाजमा सलाम गर्न मद्दत गर्दछ। Pavlovian कंडीशनिंगको अन्य उदाहरणहरू चिन्ता महसुस गर्न सिकिरहेका हुनेछन्:
1) तपाईंको अघिल्लो दर्पणमा प्रहरी रोशनी चमक गर्नको लागी; वा
2) तपाईंले दन्त चिकित्सकको कार्यालयमा आवाज सुन्नुहुँदा।
एक आचरण पोष्ट प्रयोगकर्ताले आफ्नो यौन आरोहणलाई स्क्रिनमा हाल्न सक्छ, केहि कार्यहरू हेर्न वा भिडियोबाट भिडियोमा क्लिक गर्न सक्छ।
यो खण्ड सामाग्रीको आधारमा "मस्तिष्क माथि देखि तल"क्यानाडा मा म्याक गिल युनिवर्सिटी द्वारा उत्पादित एक खुला स्रोत गाइड। यदि तपाइँ बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने यो अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ।
सिक्न एक प्रक्रिया हो जसले हामीलाई प्राप्त गरेको जानकारी, प्रभावशाली (भावनात्मक) राज्यहरू, र छापहरू राख्ने अनुमति दिन्छ जसले हाम्रो व्यवहारलाई असर गर्न सक्छ। सिकन मस्तिष्कको मुख्य गतिविधि हो, जसमा यो अंगले हाम्रा ढाँचाहरू लाई अझ राम्रो बनाउँदछ जुन हामीले अनुभव गरेका छौं।
सिक्न को लागी एन्कोडिङको साथमा समिकरण गर्न सकिन्छ, ज्ञापनको प्रक्रियामा पहिलो चरण। यसको परिणाम - स्मृति - दुवै आत्मकथात्मक डेटा र सामान्य ज्ञान को निरंतरता हो।
तर स्मृति पूर्णतया विश्वासी छैन। जब तपाईं वस्तु बुझ्नुहुन्छ, समूहका न्यूरोन्स तपाईंको मस्तिष्कका विभिन्न भागहरूमा यसको आकार, रङ, गन्ध, आवाज र यति बारेमा जानकारी प्रक्रिया गर्दछ। त्यसपछि तपाईंको दिमागले यी विभिन्न समूहहरू न्यूरोन्सको सम्बन्धमा जडान गर्दछ, र यी सम्बन्धले वस्तुको तपाईंको धारणाको आधार बनाउँछ। त्यसपछि, जब तपाई वस्तु सम्झनु चाहानुहुन्छ, तपाईले यी सम्बन्धहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। तथापि, तपाइँको कोर्टेक्सले यस उद्देश्यको लागि गर्दछ समानांतर प्रशोधन, वस्तुको तपाईँको मेमोरी बदल्न सक्दछ।
साथै, तपाईंको मस्तिष्कको मेमोरी प्रणालीमा, जानकारीको पृथक टुक्राहरू अवस्थित ज्ञानसँग सम्बन्धित कम प्रभावकारी ढंगले सम्झन सकिन्छ। नयाँ जानकारी र चीजहरू बीच नै धेरै सङ्गठनहरू तपाईंले पहिल्यै जान्नुहुन्छ, अझ राम्रो तपाइँ यो सिक्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणका लागि, तपाईंसँग एक सम्झनाको समय सम्झना हुने छ कि हिप हड्डी जांघ हड्डीसँग जोडिएको छ, जांघ हड्डीसँग जाँघको हड्डी जोडिएको छ भने, यदि तपाईसँग पहिले नै शारीरिक रचनाको आधारभूत ज्ञान छ वा गीत थाहा छ भने।
मनोवैज्ञानिकहरूले धेरै कारकहरू पत्ता लगाएका छन् जसले प्रभावकारी ढंगले मेमोरी प्रकार्यलाई प्रभाव पार्न सक्छ।
1) सतर्कता, सतर्कता, ध्यान, र एकाग्रता को डिग्री। ध्यान दिइन्छ अक्सर उपकरण हो जसले सूचनालाई मेमोरीमा आकर्षित गर्दछ। राप्ती ध्यान न्युरोप्लास्टिकको आधार हो। ध्यान खारेजले मौलिक प्रदर्शन प्रदर्शन गर्न सक्छ। धेरै मेमोरी समयले काम गर्ने मेमोरीलाई हानि पुऱ्याउन सक्छ र एडीएचडी लाई कमजोर पार्ने लक्षणहरू उत्पन्न गर्न सक्छ। हामी आफ्नो स्मृति क्षमता सुधार गर्न सजिलै जानकारी दोहोर्याउन र एकीकृत गर्न प्रयास गरेर। अनियमित ढंगले शारीरिक अस्तित्वलाई बढावा दिन्छ भन्ने उत्तेजना, जस्तै इरिटिका, सचेत प्रयासको लागि आवश्यक पर्दैन। यसलाई सजिलै नियन्त्रणमा राख्न को लागी एक सचेतना प्रयास चाहिन्छ।
2) रुचि, प्रेरणाको शक्ति, र आवश्यकता वा आवश्यकता। विषयले हामीलाई मन पराउँदा यो सिक्न सजिलो छ। यसरी, प्रेरणा एक कारक हो जसले मेमोरी बढाउँछ। केही युवाहरू जसले सँधै विषयहरूमा धेरै राम्रो गर्दैनन् तिनीहरू विद्यालयमा लाग्न बाध्य हुन्छन् प्राय प्रायः उनीहरूको मनपर्ने खेल वा वेबसाइटहरूको तथ्याङ्कका लागि एक असाधारण स्मृति छ।
3) प्रभावकारी (भावनात्मक) मान सामग्रीसँग सम्बन्धित स्मरण गर्नुपर्दछ, र व्यक्तिगतको मन र भावना को तीव्रता। घटनामा आइपर्दा हाम्रो भावनात्मक अवस्थाले हाम्रो स्मृतिलाई अझ प्रभाव पार्न सक्छ। यसैले, यदि घटना अत्यन्त अप्ठ्यारो वा आक्रोशित हुन्छ भने हामी यसको एक विशेष रूप देखि भित्री मेमोरी बनाउनेछौं। उदाहरणका लागि, धेरै व्यक्तिहरूले प्रिन्नी डायनाको मृत्युको बारेमा सिकेका थिए, वा सेप्टेम्बर 11, 2001 को आक्रमणको बारेमा तिनीहरू कहाँ थिए। स्मृतिमा भावनात्मक रूपमा चार्ज गरिएका घटनाहरूको प्रशोधन norepinephrine / noradrenaline समावेश गर्दछ, एक न्यूरोट्रांसमीटर जसले हामीलाई उत्साहित वा तनावमा ठूलो मात्रामा रिलीज गरिएको छ। जस्तै वोल्टेयरले यसलाई राख्दछ, जुन हृदय छुन्छ त्यो मेमोरीमा उत्कीर्ण हुन्छ।
4) स्थान, हल्का, ध्वनि, गंध... छोटो, सम्पूर्ण सन्दर्भ जसमा स्मरण गर्नुपर्दछ जानकारी सहित ज्ञापन गरिएको छ। यसैले हाम्रो मेमोरी सिस्टम प्रासंगिक हो। नतिजा, जब हामीले विशेष तथ्य सम्झनु भएकोमा समस्या छ भने, हामी पुनः पुन: चयन गरेर यसलाई पुन: प्राप्त गर्न सक्षम हुन सक्दछौं जहाँ हामीले यो सिक्यौं वा पुस्तक वा वेबसाइटबाट हामीले हामीले सिक्यौं। त्यहाँ त्यो पृष्ठमा एउटा तस्बिर थियो? के पृष्ठको शीर्षमा वा तलको जानकारी थियो? यस्ता वस्तुहरूलाई "सम्झौता अनुक्रमणिका" भनिन्छ। अनि किनकि हामी सधैं सन्दर्भमा साथसाथै जानकारीको साथ याद गर्छौं, हामी सिक्न सक्छौं, यस सन्दर्भलाई सम्झँदा हामी प्राय: प्रायः सम्बद्ध हुन सक्छौं, सङ्ग्रहको श्रृंखलाले जानकारी दिन्छ।
बिर्सनले हामीलाई प्रत्येक दिन प्रक्रियाको अत्यधिक मात्रामा छुटकारा पाउन सक्दछ तर हाम्रो दिमागले निर्णय गर्दछ कि यो भविष्यमा आवश्यक पर्दैन। यस प्रक्रियाले सुत्न मद्दत गर्दछ।
<< सिक्नु भनेको कुञ्जी हो यौन सम्बन्ध >>